Memphis Deplay Childhood Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Home AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Dutch Memphis Depay Child Story Plus Na-emeghe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius kasị mara aha na aha njirimara; “Ihe Nrọ Na-akpata”.
Ihe omuma anyi nke Memphis Depay Akụkọ ya na akwukwo ihe omuma Eziokwu na-ewetara gi akuko zuru oke nke ihe omuma ama site na nwata rue oge.
Nyocha nke Dutch Football Legend gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ nkwụsị na ON-Pitch amachaghị banyere ya.
Jordi Alba Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Footballgba bọọlụ bụ osisi ọlaedo, ebe nde ndị ntorobịa chọtara ndo na nkasi obi pụọ n'eziokwu ha nwere nsogbu ma ga-aga n'ihu na-eme ya.
Maka Memphis Depay, akụkọ ahụ abụghị ihe dị iche. Ugbu a na-enweghị adieu ọzọ, ka anyị bido.
Memphis Depay Childhood Akụkọ - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Memphis Depay mụrụ na 13th nke February 1994 na Moordrecht, Netherlands. Akụkọ nwata ya na-adọrọ mmasị, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ihe omimi - nke nsogbu na ule nwa oge nke ghọrọ onye nwere nnukwu onyinye pụrụ iche.
Memphis amuru nna Ghanian, Dennis Depay, na nne Dutch, Cora Schensema, na obere obodo South Holland nke Moordrecht ebe enweghi otutu ihe ime.
Moordrecht bụ obodo Dutch African kwagara na ebe ezughị okè mgbe enwere bọọlụ n'ụkwụ onye ọ bụla.
Otú ọ dị, ọ dịghị anya, tupu mmekọrịta dị n'etiti nne na nna Depay amalite ịda na mgbe Depay dị afọ anọ, nna ya ji obi ike pụọ na ezinụlọ.
Memphis na nne ya ga-anọrịrị onwe ha, na-enweghị ego ọ bụla. Nanị olileanya maka ịdị ndụ bụ obi ụtọ n'etiti onwe ha.
Nwatakịrị ọ bụla nke biri site na nkwarụ nne na nna ga-ama nke ọma oke ihe mgbu nke mmụọ ọ nwere ike ibute; ọ bụla ọmụmụ ga-ekwu okwu banyere mmebi psychological pụta ọ pụrụ inwe.
Depay bụ otu n'ime ọtụtụ ndị nwere nke a, yana mmetụta doro anya nwere mmetụta na mmepe ya nke na-adịgide ruo taa.
N'ịchọ ịlanarị, Memphis weere ihe omume nke nyere ya aka inweta ego iji lekọta nne ya. Onye na-eto eto na-etolite n'okporo ámá.
Memphis Depay Biography Eziokwu - Na-ewu Onwe Ya:
Memphis bụ onye na-agba bọl ma soro ndị enyi ya na-eme egwuregwu mgbe ụfọdụ ọbụlagodi mgbe ọ na-akpọ.
N'ịchọ iji bọlbụ kpọrọ ihe, Memphis kpebiri ịbanye na klọb ndị ntorobịa. Ọrụ ntorobịa ya malitere na afọ 6 na vv Moordrecht.
Akwụkwọ akụkọ Ashley Young Child Plus nke na-emeghị ihe ọ bụla
Mgbe ọ banyere na klọb ahụ, onye bụbu onye njikwa ntorobịa ya, Fred Rutten, gwara ya ka ọ họrọ n'etiti egwu na bọọlụ.
Luckily maka football fans, ọ họọrọ football. Little Memphis ga-abịa ọzụzụ na ọ fọrọ nke nta ka anya mmiri gbaa ya anya.
Ndị na-adịghị ike Memphis na-aga n'ihu na football ma na-egwu egwu. Otú ọ dị, ọ ga-eme ihe omume n'oge ememe.
Afọ atọ mgbe nke ahụ gasịrị, ọ kwagara Sparta Rotterdam ebe ọ nọrọ afọ 3 tupu onye ntorobịa ikpeazụ ya agbanwee PSV Eindhoven n'afọ 2006.
Memphis biri ndụ na-enweghị isi na PSV ma gbalịsie ike na ikike, na-eduga n'echiche bụ na ọ bụ nwa obi ọjọọ, nke gbagwojuru anya.
PSV nyere ya onye ndu ndu, onye kowara ya dika "Iwe dị ọkụ" na nzukọ mbụ ha.
Memphis n'oge ọ bụ nwata, amaara ya na ọ bụ onye ikpeazụ ịhapụ ọzụzụ ọzụzụ. Dị ka onye na-achọ ya, nanị ihe ọ ga-eme bụ ịbụ onye ọzọ Arjen Robben or Cristiano Ronaldo.
Na 2012, nanị otu afọ ọ ghọrọ ọkachamara, Memphis si n'azụ uwe elu ya hapụ aha ya 'Depay', na-eche na 'Depay ' bụ aha nna ya nakwa na ya enwekwaghị ịhụnanya maka nwoke hapụrụ ya na mama ya.
Thebọchị mgbe ụbọchị ọmụmụ 15th gasịrị, nna nna ya nwụrụ. Ọ bụ nwoke nke mmetụta ya dị ukwuu.
Ozugbo ọ nwụsịrị, Depay nwetara okwu raara nye nna nna ya egbugbu egbugbu n'aka ekpe ya.
N'okwu ya ..."Nwoke ahụ nyere m ume dị ukwuu ma lekọta m nke ọma," kwuru Depay ka ọ gara n'ihu…
“N'oge ahụ, echere m n'obi m: 'Aghaghị m ime ya. Amaara m ebe m chọrọ ịga, nke ahụ bụkwa n'elu. '”
N'iji ihe mgbu dị ka mkpali, Depay lekwasịrị anya na football ya. Na 16 a kpọrọ ya ka ọ nọchite anya obodo ya n'okpuru 17, ọ bụkwa akụkụ nke ndị otu 2011 European U17 Championship-mmeri nke Holland.
Henrikh Mkhitaryan Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
Ka oge na-aga, Depay ghọrọ ngwa agha dị mkpa na Louis van Gaal ọhụrụ Oranje, onye gbanwere mmetụta nke ije ije ya, ike ya na aghụghọ mere ka otuto toro ya.
Ọ kwagara Manchester United bụ ihe na-esote ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Karrueche Tientrese Tran na Memphis Depay - Akụkọ Lovehụnanya:
Memphis Depay kwuru ụbọchị mmadụ bụ Karrueche Tientrese Tran nke amụrụ na 17th nke May, 1988 na Los Angeles.
Ọ gụrụ akwụkwọ na Birmingham High School n'afọ 2006. Ọ bụ onye ama ama maka ịbụ Onye Nwanyị Chris Brown nọ na-apụ apụ n'ọrụ ọ gbasara 2009-2015.
Mgbe ya na Chris Brown nwara Tran na ndụ ya, Depay gara nwa agbọghọ nwa agbọghọ zuru ụwa ọnụ.
Na June 2017, a mara ọkwa na soshal midia na Depay na Lori Harvey kwere nkwa, nwa nwanyị nke ọdụdụ onye America telivishọn Steve Harvey.
Ọ ghọrọ ihe mere Depay ji malite ịnụ ụtọ ọ ofụ California ọ bụla ezumike.
Memphis Depay zipụrụ akụkọ banyere ya na enyi ya nwanyị Lori Harvey itinye aka na akaụntụ Instagram ya. Nke a mere mgbe ọ kwụsịrị nkwụsị ya site na ịkọgara nwa agbọghọ dị afọ 22 Lori Harvey nke pụtara na foto abụọ na Depay.
Otu, nke e bipụtara na Instagram nke ndị egwuregwu bọọlụ, gosipụtara ya ka ọ gbadara n'otu ikpere ka ọ na-agba ajụjụ ahụ.
Foto ọzọ nke 'Ọ KWES YR Y YESSSS !!!!!!!' dị ka a hụrụ n'okpuru.
Memphis Depay Ezinụlọ:
Memphis Deplay sitere na ihe nketa Africa-Ghanian nke ezinụlọ dara ogbenye. A mụrụ Dennis nna ya na Ghana.
Dennis kwagara Moordrecht, Holland, mgbe ọ dị afọ 23 iji chọọ ndụ ka mma. Otu ohere izute nwa agbọghọ obodo Cora (Memphis Depay's mum) n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè dugara n'ịhụnanya - n'agbanyeghị mmegide sitere n'aka ndị mụrụ ya.
Ha enweghị mmasị na onye si mba Africa kwabata nke nwere ụmụ abụọ site na mmekọrịta mbụ.
Dennis na Cora nwere obi uto ibido ezinulo ha wee gbaga na Ghana iweghachite umu ya Geoffrey na Georgina. Ndị a bụ nwanne nwanne na nwanne nke Memphis Depay.
Na 1994, afọ anọ mgbe ha lụsịrị, ha mere ememme ọbịbịa nke otu nwa ha mụrụ, Memphis.
Mana mgbe Memphis dị afọ anọ, alụmdi na nwunye nke ndị mụrụ ya dara. Dennis na ụmụ ya ndị okenye kwagara ebe ahụ. Dennis rụrụ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ dị na Gouda, bụrụkwa pastọ ụka.
Ya na Cora kewapụrụ iche. Mmekọrịta ha arụpụtaghị ma ọlị ma ọ bụ tie mkpu ibe ha. Ndị uwe ojii etinyeghịkwa aka.
N'okpuru bụ foto nke nna Ghanian na-enweghị mgbaghara na-ebu Memphis n'apata ya nanị afọ atọ tupu agbahapụ aha ya.
Ọ bụ ya kpatara Memphis Depay ji bie ndụ nke nwatakịrị na-ewe iwe na mgbagwoju anya n'oge ọ bụ nwata.
Paul Scholes Child Story Plus Na-enweghị Nkọwa Eziokwu
Ọnụnọ Dennis Depay ezughị oke iji gbochie nwa ya dara ogbenye mgbe ọ rịgoro n'elu ubube ma jiri nkà ya mee ihe nke ọma. Akụkọ na-egosi nna Memphis nwetara ụmụaka ndị ọzọ site na nwanyị ọzọ.
Ịghaghachi Mgbe Ndụ Dị Mma: N'oge na-adịbeghị anya, Dennis gosipụtara na ọ maara na nwa ya nwoke mere ya ka ọ bụrụ ọkachamara n'ịgba ọsọ. N’okpuru bụ foto Dennis dị afọ 52 n’oge ọ na-ede Bio a.
Ozugbo ọ pụtara, ọ ghọrọ onye siri ike nke na-ahapụghị Memphis mgbe nkewa ahụ gasịrị kama ọ na-akpọtụrụ ya mgbe niile. Ọ na-ekwu kama ịkwụ ụgwọ nkwado ụmụaka ọ kwụghachiri ego loan 11,000 nke di na nwunye ahụ nwere.
N'okwu ya ọzọ: “Alụkwaghịm ahụ mere ma m ga-ahụ ya mgbe niile. M na-enyekwa ego. Enweghị nsogbu na ịnweta.
Enwere m ike ịhụ Memphis mgbe ọ bụla m chọrọ. Ya na m nọrọ ọtụtụ oge, m ga-azụtara ya uwe - na bọlbụ. Ana m eleta ya mgbe niile ma ha mara ya. ”
O kpughere maka oge mbụ otú Memphis si gbochie ya, nwanne ya nwoke na ọkara nwanne ya ebe ọ bụ na ọ bụrụ ndị na-agba ụkwụ na ntụrụndụ. Dennis, bụ onye a na-akpasu iwe, kwuru n'ụzọ mwute, sị:
"Na-ekwu na m ahụghị ya mgbe ọ anọ bụ ụgha. Ọ bụ ihe a na-apụghị ikwenye ekwenye, ọ bụghị mma. Ọ bụ nwa m, m hụkwara ya n'anya.
Abụ m nwoke ahụ nyere ya bọl mbụ ya. Ọ dịghị ahapụ m ya. Nke ahụ abụghị eziokwu. Anọ m mgbe niile maka ya.
Ahụrụ m ya na YouTube na-ekwu banyere nna ya, na-ekwu na ọ chọghị itinye aha m n'azụ ya. Ọ na-eme ka m nwee mmetụta dị egwu. Ọ ga-amasị m ịlaghachi azụ na ya. Ọ na-atụ m n'anya nke ukwuu. "
Dennis Depay gara n'ihu na nkwupụta ya… "Memphis nwere mmasị igwu mmiri, mana ọ hụrụ football n'anya karịa. Azụrụ m ya bọlbụ mbụ ya ma ị ga - ahụ na o nwere ikike.
O siri ezigbo ike. N'oge ahụ, anyị na-egwuri egwu n'ime ụlọ n'ihi na ime ụlọ ahụ buru ibu. Mgbe anyị gara igwu mmiri, anyị ga-ewere bọọlụ ma kpọọ n'èzí na ahịhịa.
Ebe ọ bụla ọ gara, ọ ga-ewere bọl. Mgbe anyị gara ụka, ọ ga-ewere bọl. Ọ na-agbasi ya ike banyere football site na nwata, ị nwere ike ịhụ na ọ bụ nwata nwoke hụrụ football n'anya.
Memphis Depay papa Dennis dị ka n'oge ọ na-ede akwụkwọ ugbu a na-ebi n'ụlọ ka nnọọ mma karịa na mpaghara Amsterdam nke dịpụrụ adịpụ.
Memphis Depay Biography - Nkekọ nne na nhụjuanya ụmụaka:
Nne: Memphis Depay nwere mmekọrịta chiri anya na nne ya, Cora Schensema.
Isi mmalite ya na-ekpughe na enweghị ike ịhụ ya mgbe niile na-emetụta arụmọrụ ya na pitch.
N'oge ahụ, Memphis bụ nwata na-ama jijiji ọzọ mgbe mama ya Cora na nna ya nwere nnukwu stepkids.
Memmụ nwanne ya nwoke na ụmụnne ya nwanyị kewapụrụ, na-emegbu Little Memphis. Ya na onye ọhụụ ahụ, Cora nwere oge siri ike yana Memphis nwekwara. Ma Cora hụrụ ya n'anya ma ghara ịhapụ ya.
Dị ka Dennis kwuru n'otu oge, “Otu ụbọchị, Memphis bịara n’ụlọ m wee webata ngwongwo ya niile.
O kwuru, 'Achọghị m ịnọnyere nne m ọzọ, achọrọ m ibi na gị. M kpọrọ mama ya, onye na-ebe ákwá. Kidsmụaka ndị ọzọ ahụghị ya n'anya n'ihi talent ya.
Ha malitere ịkpọ ya asị nke mere na ezinụlọ ahụ tụgharịrị megide ya. Mgbe ya na Sparta na-azụ ọzụzụ, m ga-akpọrọ ya mgbe ụfọdụ.
Mgbe ọ bụla ya na nne ya nwere esemokwu, ọ ga-agwa m ka m were ya. Dennis kwenyere na ezinụlọ tụgharịrị Memphis megide ya mgbe ya na PSV Eindhoven nwere nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya na 2012. ”
Dennis ezigbo nna ya ga-aga nyere ya aka mgbe ụmụaka ndị ọzọ gụnyere nna ha kụrụ nwa ya ihe ọ bụla. Nke a mere ọzọ steepụ. n’etiti ezinụlọ.
Themụaka ndị ọzọ nweere ya anyaụfụ ma nke ahụ mekwara ka ọ ka njọ n'ihi na ọ bụ ezigbo ndị na-agba ọsọ ụkwụ na otu mgbe ọ na-akwụ ụgwọ ego ya.
Taa, a na-azọrọ na ezinụlọ ya na-esochi ego ya tinyere nna ya nke ọtụtụ ndị kwuru na ọ chọrọ iji ego ya gaa Africa.
Dennis taa ekpughela na ọ chọghị ego Memphis nke ọ na-arụ oge niile.
Dị ka n'oge ederede Memphis Depay Bio, ọ gbagharala ụmụnne ya ndị nwoke na ndị nwanyị site n'aka nna ya ma ọ bụghị ezigbo nna ya, Dennis na onye ọzọ a na-amaghị ama.
N'ikpeazụ, Dennis kwuru nke a gbasara ezinụlọ… ”Ndị ezinụlọ maara na m meela ọtụtụ ihe maka ha, mana ego na-abịa, ha mebiri aha m. Ọ bụ onye nzuzu."
Memphis Depay Tattoo pụtara:
Memphis kwuru na ọ bụ "Zụlitere gị n'oké ọhịa," na ihe osise ya kachasị mma na-anọchite anya oge ndị siri ike o diri na ndụ ya.
Ọdụm na azụ ya: Memphis ga-anọrịrị maka awa 24 ka egbu egbu egbu ya.
“Enwere m mmetụta oge niile na a zụlitere m n'oké ọhịa: Anọrọ m n'èzí mgbe niile, agara m ebe ndị siri ike na enweela m oge nsogbu.
Ọdụm bụ maka m, 'eze nke ọhịa,' m na-anọdụkwa n'ụkwụ m n'agbanyeghị na ọ siri ike. ”
Ụdị Ọcha Ya kacha mma: Ihe mbụ PSV kpakpando abụghị naanị na-enwe mmasị na egbugbu ọdụm ya ma na-ekpughe otu n'ime ndị ọkacha mmasị ya bụ otu n'ime obere ya - obere gburugburu na nkwojiaka ya dị ka a hụrụ n'okpuru.
Memphis nwere obere gburugburu na aka ya, na-ekpughe na ọ bụ n'ihi obere ndị enyi ya.
Ụdị Ụdọ Ya: Ugbu a, lee nke dị ọgịrịga ya. Memphis Depay na-etu ọnụ na egbugbu nke Kraịst Onye Mgbapụta tinyere ọgịrịga ya mgbe ọ gbasịrị Australia na 2014 World Cup maka Holland.
Ka Memphis na-etinye ya; “Ọnwụ ahụ dị n’akụkụ ọgịrịga m na-egosi Jizọs nke Rio. Enwetara m nke ahụ mgbe m na-egwuri egwu na World Cup na m meriri ihe mgbaru ọsọ m mbụ. Nke ahụ gbanwere ọtụtụ ihe n'ọrụ m nke mere na ọ bụ otu n'ime ọkacha mmasị m.
Ụbọchị: Ihe mgbaru ọsọ ya megide Socceroos (Australia) bụ ihe mgbaru ọsọ mbụ ya maka obodo ya, ọ gbakwara Chile na otu 2014 WorldCup asọmpi.
Memphis Depay Ndụ nke Onwe:
Memphis Depay mara ezigbo mma ma nwee àgwà ndị a na àgwà ya.
Ike: Ọ na-aga n'ihu, nke mbụ na nke onwe ya
Ajọ: Na-agba ọsọ site na okwu mmetụta uche, na-ejide onwe ya (akaof), mmetụta na-enweghị mgbagha.
Ihe Memphis nwere mmasị: Na-ekpori ndụ na ịhụnanya maka ndụ ya (Lori Harvey), na-alụ ọgụ n'ihi ihe kpatara ya, na-enwe mkparịta ụka ọgụgụ isi na ịbụ onye na-ege ntị nke ọma.
Ihe Memphis na-achọghị: Nkwụsịtụ na ọrụ ya (ebe ọ nọ na Man United), ịnọ naanị ya ma nwee nsogbu ma ọ bụ nsogbu.
Na nchịkọta, Memphis bụ onye ihere na nke dị jụụ, mana n'aka nke ọzọ, ọ nwere ike ịdị ike ma dị ike. Agbanyeghị, n'okwu abụọ a, ọ bụ onye miri emi na onye nwere ọgụgụ isi nke nwere ike ịhụ n'enweghị ajọ mbunobi.
Ọ nwere ike ịmegharị ike na ike gbara ya gburugburu dị ka a hụrụ site na Memphis Depay akụkọ nwata.
Oge ụfọdụ, Memphis nwere nnukwu mkpa ọ ga-anọ naanị ya oge ọ bụla. N'ezie, ọ na-ele ụwa anya dị ka ebe jupụtara na ohere.
Memphis Depay LifeStyle: Nke a
Olu ya na pitch emewo ka ọ baa ọgaranya. A maara ya maka ụgbọala ụgbọ ala ya.
Memphis nwere ebe obibi 1.3million nke dị na Eindhoven, Holland nke na-akwado ụda ọkpọ.
Onye na-akwado Madrid:
Mgbe Madrid meriri onye iro ha bụ Barcelona na Copa del Rey Clasico nke ikpeazụ na 2013, Depay ejiriwo ọyoụ tweeted "Hala Madrid!"
Ọnụnọ nke Louis van Gaal na Manchester United nwere ike ịbụ otu ihe na mkpebi Depay ịhọrọ Manchester United. Onyinye sitere na Real Madrid n'ọdịnihu ga-eme ka ọ ghara ịdị mfe site na Depay ma ọ bụrụ na ọ bịa.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Memphis Depay Nwatakiri Akuko na akuko ihe omuma. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu a, biko tinye okwu gị ma ọ bụ kpọtụrụ anyị !.
Akwụkwọ ọkọlọtọ Barcelona Football
Akwụkwọ akụkọ PSV Eindhoven
Joachim Andersen Childhood Akụkọ gbakwunyere Eziokwu Untold Biography
Ilaix Moriba Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Houssem Aouar Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ